Lolu lonke ulwazi esilwaziyo nge-LG G5 | Izindaba zamagajethi
Njengoba i-LG yethule i-LG G2 emakethe, ibilokhu ithola ukugqama emakethe yamaselula futhi ikakhulukazi kuleyo ebizwa ngokuthi yimakethe ephezulu. Le smartphone, abasebenzisi abaningi abasenayo futhi abayisebenzisayo nsuku zonke, ibingaphambi nangemva kwenkampani enemvelaphi yaseNingizimu Korea. I- LG G3 ithole ihlombe elikhulu kakhulu elivela kubasebenzisi hhayi kuphela, kepha futhi nochwepheshe abaningi kanye i-LG G4 iqedile ukukhuphula i-LG njengomunye wabakhiqizi abahamba phambili okwamanje.
Ngo-2016, i-LG G5 entsha kulindeleke ukuthi ingene emakethe, into engenzeka ezinsukwini ezimbalwa ngaphakathi kohlaka lwe-Mobile World Congress, okuzobanjelwa unyaka owodwa eBarcelona futhi sekuvele kunamahemuhemu amaningi nokuvuza esikwaziyo ngaleli fulegi elisha elizoziqhenya ngokuqinisekile ngomklamo ovelele nokucaciswa okukhanyayo.
Yize kusasele izinsuku ezimbalwa ukwethulwa kwale LG G5, sinqume ukudala le ndatshana lapho si-oda ngokusemthethweni konke esaziyo kuze kube manje mayelana ne-LG flagship entsha. Futhi-ke sizonanela wonke noma cishe wonke amahemuhemu ngalesi siginali, ekugcineni sibe nombono ophelele wokuthi i-G5 izoba yini.
2 Ukucaciswa kobuchwepheshe
3 Izici ezikhethekile nezinketho
4 Qalisa nentengo
5 Yini esingathanda ukuyibona ku-LG G5 entsha?
5.1 Ibhethri elihle
5.2 Asifuni enye ipulasitiki
5.3 Ikhamera evelele
Umklamo wamadivayisi we-LG wakamuva ubuncane ilukuluku futhi yehlukile kulokho esingakuthola kuma-terminals amaningi emakethe. Ngazo zonke izinkinobho ezingemuva nasemaphethelweni ahlanzekile, bazihlukanisile nabanye abakhiqizi, yize sikholelwa ukuthi ngaphandle kokukholisa ngokuphelele bonke abasebenzisi.
Mhlawumbe ngalokhu i-LG G5 entsha ingafinyelela emakethe ngezinkinobho ezibekwe ezinhlangothini, ilahle umqondo wokuyibeka ngemuva kwedivayisi. Lokhu akuqinisekisiwe futhi futhi ukuthi yize sikwazile ukubona izithombe eziningana zalokho okwakucatshangwa ukuthi kwakhiwe i-smartphone, ayikho neyodwa yazo efanisa cishe noma yini.
Ngokusho kwamahemuhemu ahlukahlukene, kungenzeka ukuthi sibhekene nomakhalekhukhwini oyisimo esihle, lapho singakwazi khona ukuqaqa izingxenye zalo eziningi, njengoba ubona esithombeni ongasibona ngezansi. Ngaphezu kwalokho, konke kukhombisa ukuthi ekugcineni sizoyeka ukubona i-terminal enamapulasitiki futhi ngaphandle kokuba khona kwesikhumba esihle esingasibona ku-LG G4.
Ngokuqondene nokucaciswa kwezobuchwepheshe cishe wonke amahemuhemu akhombisa ukuthi i-LG G5 izofaka a Isikrini se-QHD esingu-5,3-intshi. Ngaphakathi besizothola okusha kusetshenzwe I-Snapdragon 820 nekhamera engaphambili engama-megapixel angama-21 nekhamera engaphambili eyi-8 megapixel.
Akungabazeki ukuthi sizobe sibhekene ne-terminal yalokhu okubizwa ngokuthi yi-high-end, ngokungazi ukuthi i-terminal esizosinikeza yona ingakanani i-RAM, yize cishe kuzoba phakathi kuka-3 no-4 GB ukuze yonke into ihambe ngaphandle inkinga futhi iprosesa leQualcomm alihlupheki nganoma yisiphi isikhathi.
Mayelana nekhamera, kulindeleke ukuthi ilandele ezinyathelweni zaleyo esiyibone ku-LG G4 nokuthi abaningi babe nesibindi sokusho ukuthi sibheke ikhamera ehamba phambili emakethe eyake yafakwa kumakhalekhukhwini. Eminye yemisebenzi yayo, njengenketho yokusebenza nayo ngesandla, ngethemba ukuthi iyaqhubeka nokuba khona kakhulu ku-LG G5.
Izici ezikhethekile nezinketho
Ama-Smartphones akamuva atholwe yi-LG abhekwe njengcono noma ngokubi ngokuhluka kunabanye babenzi. Kokubili ekwakhiweni nasekucacisweni nasemisebenzini nasezinketho sikwazile ukubona amatheminali ahlukaniswe kahle. Lokhu ngokungangabazeki kube ngesinye sezizathu esenza ukuthi i-LG G3 noma i-LG G4 ibe ngumthengisi omkhulu emakethe.
Enye yezici zenoveli ezingafakwa i-flagship elandelayo ye-LG yi- isithwebuli se-iris esingavumela noma yimuphi umsebenzisi ukuthi abonakale nge-iris yakhe. Akucaci ukuthi ngabe yiziphi izinhlelo zokusebenza ezingaba nazo, kepha njengesilinganiso sokuphepha kungenzeka icishe iphelele, yize ukusebenza kwayo kokugcina kuzofanele kubonakale ukuthi ngabe i-LG ekugcineni ithatha isinqumo sokuyifaka phakathi kwezici zedivayisi yayo entsha yeselula.
Futhi kucatshangwa ukuthi ikhamera izoqhubeka nokuba ngenye yamandla ayo, nokucaciswa kwesoftware okuhlukile okwehlukile kunabanye babakhiqizi.
Ekugcineni, kusuka ukuklama, esinye sezici ezikhetheke kakhulu futhi ezihlukile zama-smartphones e-LG esike sakhuluma ngawo ngaphambili, kepha akusho lokho Siyaqiniseka ukuthi kuzoba ngenye yezinto ezikhethekile ezizosinqoba kusuka ku-LG G5.
Njengoba besivele sikukhombisile ezinsukwini ezedlule, i-LG ithumele isimemo kumcimbi olandelayo Februwari 21, kusasele usuku olulodwa ngaphambi kokuvulwa kwe-Mobile World Congress futhi lapho kuthathwa kalula ukuthi i-LG G5 entsha izokwethulwa ngokusemthethweni.
Lesi simemo sihambisana nelogo ethi "Ukudlala kuqala", okufana nokuthi umdlalo uqala kanjani, uma siwuhumushela ku-Spanish. Mhlawumbe i-LG izosinikeza idivaysi eqonde ngqo ukuze sikwazi ukujabulela ukudlala ngaphandle kokuphumula? Angicabangi kanjalo, kunalokho ngicabanga ukuthi bafuna ukuthi sibone ukuthi umdlalo wokukwazi ukujabulela i-terminal uzoqala ngoFebhuwari 21.
Ukufika kwayo emakethe kungenzeka ngenyanga kaMashi ngentengo okusengenye yezinto ezingaziwa kakhulu esingakakuvezi. Uma i-LG G5 iphinde ibe nepulasitiki njenge-protagonist eyinhloko, intengo izoba yinye, kepha uma ekugcineni, njengoba konke kukhomba, igqoke insimbi, ngokuqinisekile sizobona ukuthi kuzofanele sikhokhe kanjani ama-euro ambalwa ngaphezu kwethu wenza isibonelo nge-LG G4.
Abakwa-LG bathumele isimemo kwabezindaba ngalo mcimbi ozoba ngoFebhuwari 21, kusasele usuku olulodwa kuvulwe ngokusemthethweni i-MWC 2016. "Play play", umdlalo uqala igama lomcimbi esethemba ukuthi i-G5 ibe kwethulwe. Uma kunjalo, i-G5 ingaqaliswa emakethe ngoMashi.
Yini esingathanda ukuyibona ku-LG G5 entsha?
Izinto eziningi zilindelwe kusuka ku-LG G5, empeleni njengaku-Smartphones ngayinye esezingeni eliphezulu efinyelela emakethe. Manje njengoba sesibonile futhi sabukeza konke noma cishe konke ebesingakubona esigungwini esisha se-LG, isikhathi sesifikile sokuthi sikutshele konke esingathanda ukukubona kufulegi entsha yenkampani yaseNingizimu Korea.
Elinye lamaphuzu abuthakathaka ku-LG G3 ne-LG G4 ngokungangabazeki ibhethri lalo. Abakwa-LG bebesezingeni eliphezulu ngokuya ngezimpawu nokucaciswa, kepha akukho kulawa ma-terminals amabili akwazi ukufaka ibhethri elizosebenza. Ngethemba ukuthi izinto zizoshintsha kakhulu kwi-LG G5 entsha futhi ekugcineni singathokozela ibhethri futhi ngokujwayelekile ukwenzelwa konke okukuzungezile okusivumela ukuzimela okukhulu kakhulu.
I-LG, qaphela futhi usinikeze ibhethri esivumela thina, okungenani ukuthi sifike ekugcineni kosuku nge-LG G5 ngaphandle kokubhekana nezinkinga eziningi kakhulu.
Asifuni enye ipulasitiki
Ngaphandle kokuthi ku-LG G4 ipulasitiki esetshenziselwe ukwakhiwa kwe-terminal ibinomphetho omuhle, futhi nokuthinta kokugcina kwesikhumba, imvamisa sikhathele ngamadivayisi eselula anokuqedwa kwepulasitiki. Akunakuba ukuthi ukukhokha inani lemali esilikhokhela i-terminal yalokhu okubizwa ngokuthi yi-high-end lokhu kuphelile ngopulasitiki.
Kusuka ku-LG G5 sethemba ukubona ukuphela kwensimbi futhi uma kungenzeka, okungenani ngokombono wami, ngiyethemba ukuthi bazolahla isikhumba sekhava yangemuva futhi angicabangi ukuthi kuyinto okufanele bayibeke emuva kugcwele ukungcola ngokukhulu ukukhululeka, konakalisa isiphetho esihle sesikhumba ngokuphazima kweso.
Ikhamera ye-LG G4 ngaphandle kokungabaza ibivele ivelele futhi ngiyethemba ukuthi enye ye-LG G5 ilingana okungenani uma iphakeme ngandlela thile.. Futhi ngokubuza, ngiyethemba ukuthi izinketho ezifanayo ziyagcinwa nokuthi singayikhama ngesandla ikhamera ye-G5 ngokwesibonelo ukuthola izithombe ezisezingeni eliphakeme.
Ezinsukwini ezimbalwa ekugcineni sizokwazi ukuhlangabezana ne-LG G5, esilindele lukhulu kuyo futhi esethemba ukuthi ngeke isidumaze. Intengo yayo ngokungangabazeki izoba ngenye yezimpahla ezinhle zokuphumelela emakethe futhi lokho ukuthi i-LG imvamisa inikeza ama-terminals ayo ngentengo engaphansi kwesilinganiso esabekwa imakethe.
Uma intengo ye-LG G5 iqhubeka nomkhuba obekwe yinkampani yaseNingizimu Korea, lungela, ngoba singaba ne-smartphone evelele etholakala emakethe ngentengo eyehliswe kakhulu.
Yini oyilindele ku-LG G5?. Ungasitshela umbono wakho ngayo esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma ngenye yezinkundla zokuxhumana lapho sikhona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Lolu lonke ulwazi esilwaziyo nge-LG G5
7 Amaqhinga wetelegram ozoba ngungoti weqiniso ngawo